आफ्नो चाहनाको ढोका उघारेर हेरौँ ! – HamroKatha
आफ्नो चाहनाको ढोका उघारेर हेरौँ !
हाम्रो कथा २०७५ फागुन २९ गते १६:३४
हामी अधिकांश युवा आज पनि नेपालमा केही सम्भावना नदेखेर बिदेशीने क्रम कम हुन सकेको छैन । के साँचै यहाँ सम्भावना नभएको हो त ? यहाँ केही गर्न खोज्नेहरू असफल नै हुन्छन् त ? हामी सँग सफलताको उदाहरण नै नभएको हो त ? त्यस्तो कुनै क्षेत्र छैनन् त जहाँ सम्भावनाको झुत्तो नै हात पार्न सक्कियोस ?
हाम्रै समुदायका सफल व्यक्तिहरूको उदाहरण हेरौँ त !
तस्वीर : youtube.com
१) नाजिर हुसेन, रङ्गकर्मी तथा चलचित्र कर्मी
“ बापू मार्देको ? चक्कुसे ? गोलिसे मारो-गोली से, चक्कुको भाउ बढ़हयो रे!” यो एउटा चलचित्रमा नाजिरले बोलेको डायलग हो । जसले उनलाई कैयौँ युवा माझ लोकप्रिय बनायो । नाजिर बिस, बाईस वर्षे अल्लारे उमेरका नेपाली युवा जसलाई केही वर्ष पहिले कसैले चिन्दैन थियो I न उनी आफैलाई लागेको थियो कि; उनी आज युवा माझ यति लोकप्रिय बन्छन् । केवल उनले आफ्नो प्रतिभा र चाहको पछाडि हिँडे या भनौँ आफू जे कामले खुसी रहन सक्थे त्यही काम गरे । उनी केही वर्ष अघि मात्र रङ्गमञ्चमा पाइला राखेका कलिला युवा, उनको कलाकारिता प्रतिको मोह लगावका कारण छोटो समय मै चलचित्रमा आफूलाई प्रस्तुत गर्न सफल भए जसका निम्ति उनलाई अवसर धेरै खोतल्नु समेत परेन । आज सम्म उनले छोटो समय मै दर्जनौँ चलचित्र गरिसके अनि एउटा चलचित्र बाट यहाँको महँगी थेग्ने जसले उनलाई चार-पाँच महिनासम्म आरामले बाच्न सक्ने पारिश्रमिक समेत प्राप्त गर्छन् । सबै भन्दा समाजमा यो कलिलो उमेरमा उनको आफ्नो प्रतिष्ठा छ I उनी आफ्नो जीवन प्रति सन्तुष्ट मात्र हैन त्यो भन्दा बढी खुसी छन् ।
तस्वीर : dailytelegraph.com.au
२) सन्दीप लामिछाने, क्रिकेटर
अहिलेका जल्दा-बल्दा राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका सदस्य सन्दीप लामिछाने पनि किशोर अवस्थाबाट उक्कलो चड्दै गरेका तन्नेरी हुन । जब; केवल रमाइलोका निम्ति मैदानमा क्रिकेट खेलिरहेका सन्दीपमा राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका मुख्य प्रशिक्षकको नजर पर्‍यो तब उनले सपनामा पनि नसोचेको आफ्नो देशमा मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय स्तर मै सान,नाम र इनाम प्राप्त गरे । केही वर्षको अनुभव र प्रस्तुतिबाट सन्दीपले आम स्तरबाट आफूलाई निक्कै माथि उठाउँन सफल भए । हाल उनलाई राष्ट्रिय टोली मात्र नभएर विश्व स्तरका भिन्न प्रतिष्ठित क्लबबाट उच्च प्रोत्साहनका साथ खेल्न भ्याई नभ्याई छ ।
तस्वीर : Nepali E-chord
३) नितेश जङ्ग कुँवर, सङ्गीतकार
आजका नेपाली सांगीतिक क्षेत्रका विशेष, युवा माझ लोकप्रिय नाम हो नितेश जङ्ग कुँवर । नितेश आफ्नो प्रतिभा द्वारा युट्युबबाट चर्चामा आएका एक तन्नेरी युवा हुन । आफ्नो प्रतिभालाई युटुब द्वारा सार्वजनिक गरेर लाखौँ युवाको मन जित्न सफल नितेश अहिले देश विदेशका अनेकौँ कार्यक्रममा व्यस्त रहने गर्छन् । पैसा पनि राम्रै कमाएका छन् । पैसा भन्दा नाम; इज्जत छ I आज उनी सँग र सबै बन्दा बढी त आत्मसन्तुष्टि छ ।
केही सफल व्यक्तिका यी उदाहरण हेरे पछी प्रस्ट हुन्छ कि, सम्भावना अन्य कुनै देश मा भन्दा कैयौँ गुणा बढी हाम्रै देशमा छ । मान्छेलाई गाँस,बास र कपास पछि चाहिने अर्को कुरा प्रतिष्ठा हो, प्रतिष्ठा भन्दा ठुलो आत्मासन्तुष्टि हो I जसले उसलाई सधैँ अघि बढ्न प्रेरित गरिरहन्छ । जुन आफ्नो देशको भन्दा अरूको देशमा कसरी हामीलाई मिल्छ र ? तपाईँ हामी पनि माथिका उदाहरण झैँ आफ्नो खुसी र चाहना अनुसार एउटा प्रयास त उघारेर हेरौँ I बाटो आवश्य पनि खुल्ने छ, सम्भावना स्वतः अन्कुरिन्छ I